Izindaba - Amathiphu okusetshenziswa nokunakekelwa kwamabhodlela kawoyela abalulekile
Amathiphu okusetshenziswa nokugcinwa kwamabhodlela kawoyela abalulekile
Ngaphezu kokugcoba amafutha abalulekile ezandleni zakho noma ngokuthinta umshini ophefumula amanzi, iThe abakhiqizi bamabhodlela kawoyela abalulekile ye Ishailand Rainbow Industrial Co., ltd ziphakamisa ukuthi ungafaka futhi amafutha abalulekile kuibhodlela likawoyela elibalulekile”Uhambe nazo. Ungalizwa iphunga lamafutha abalulekile nganoma yisiphi isikhathi ukuphumuza ~ imakethe yamanje Amafutha amaningi abalulekile anikela "ngamabhodlela kawoyela abalulekile" kanye "namabhodlela kawoyela abalulekile", angasetshenziswa emigexo, izindandatho, amacici, namasongo, amaminerali namasongo, imihlobiso elengayo nezinye izesekeli. I-Iphakethe le-RB okulandelayo incazelo yokuthi ungawasebenzisa kanjani amabhodlela kawoyela abalulekile nokuthi uwagcina kanjani.
☆ Ungawasebenzisa kanjani amabhodlela kawoyela abalulekile
● Ibhodlela likawoyela elibalulekile lengilazi
Okokuqala lungisa isitsha sengilazi esincane noma isitsha esincane esingabamba inani elincane lamafutha abalulekile, uphonsa uwoyela obalulekile esitsheni esincane ngokuya ngesilinganiso, sebenzisa inaliti kawoyela ebalulekile enamathiselwe ukuqedela ukukhipha, bese uyigcwalisa engilazini ukuqedela.
● Ibhodlela likawoyela elibalulekile
Amafutha abalulekile angagcwaliswa ngendlela efanayo nebhodlela lamafutha elibalulekile lengilazi (elichazwe entweni engenhla), noma uwoyela obalulekile ungaphonswa ngqo ebhodleleni nge-45 °. Isikhumbuzi esikhethekile: Amakhemikhali amabhodlela kawoyela abalulekile amaminerali wonke enziwe ngokukhethekile. Ukuvimbela ukhokho ukuthi wephule ikepisi lamabhodlela futhi kuthinte ukuqina kwensimbi yensimbi eluhlaza, sicela uqiniseke ukuthi uyayivala futhi uyivale ngokuzungezisa.
☆ Ukuhlanza ibhodlela likawoyela elibalulekile
Zonke izinhlobo zamabhodlela kawoyela abalulekile adinga ukuhlanzwa nokuhlanzwa njalo emavikini amabili. Uma ushintsha amafutha abalulekile ahlukene, udinga futhi ukuwahlanza ngaphambi kokufaka amafomula ahlukile. Lapho uhlanza, sicela usebenzise i-75% yotshwala futhi ugweme ukusebenzisa ezinye izinto zokuhlanza.
Sebenzisa inaliti ukujova utshwala ebhodleleni lengilazi bese uluxukuza ngobumnene, bese umunca utshwala obungcolile ubuthele. Phinda lesi senzo izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ukuqedela ukuhlanzwa, futhi ungaqhubeka nokwengeza amafutha abalulekile ozowasebenzisa.
Lapho uhlanza, cwilisa ibhodlela likawoyela elibalulekile ku-75% utshwala cishe imizuzu emihlanu, bese ulikhipha ulisule ngethawula lephepha. Ingaphakathi lebhodlela likawoyela elibalulekile lingahlanzwa nge-swab encane kakotini noma usule ingxube esele. Ngaphezu kwalokho, ungamanzisi amakepisi amabhodlela imizuzwana engaphezu kwengu-30 ukuvimbela ukhokho ukuba ungavuvukali futhi ukhubaze noma uthinte ukuqina kwekhava yensimbi eluhlaza.
Imininingwane engenhla ihlelwe ngu IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd.
IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ngumkhiqizi, iphakethe le-rainbow lase-Shanghai Nikeza ukupakisha kwezimonyo okukodwa.